Digital Fusion Co.,Ltd
Your mobile is your shop
သင့်ဆိုင်ကို သင့် mobile phone မှတဆင့် ခေတ်မီဆန်းသစ်သော Digital နည်းပညာဖြင့် စီမံခန့်ခွဲဖို့
FusionPOS ကို ယခုပဲစမ်းသုံးကြည့်လိုက်ပါ
Product of Myanmar Made by
သင့်အရောင်းဆိုင်အတွက် အထူးသီးသန့် ထုတ်လုပ်ထားသော POS Device
POS Device ဟာ သင့်အရောင်းဆိုင်အတွက် လိုအပ်တဲ့ Printer ရယ်၊ Barcode Scanner ရယ်၊ Software ရယ်ကို ခေတ်မီရိုးရှင်းစွာ ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် သင့်ကို လွယ်ကူ အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်စေမှာပါ
သင့်ဆိုင်ရဲ့အချက်အလက်တွေဟာ သင်နဲ့အတူ အမြဲရှိနေမှာပါ
FusionPOS မှာ သင့်ဆိုင်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အချက်အလက်တွေကို FusionCLOUD မှာ Back-Up ပြုလုပ်ပြီး လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ ပြန်လည်ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်တဲ့အတွက် အရေးကြီးအချက်အလက်တွေ မဆုံးတော့ဘူးပေါ့
FusionPOS မှာ အင်္ဂလိပ်စာစနစ်အပြင် ရွှေမြန်မာတို့အတွက် မြန်မာစာစနစ်အတွက်ကိုပါ သင့်စိတ်တိုင်းကျရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
ဘောက်ချာ သေးသေးလေးထုတ်မလား? ကြီးကြီးထုတ်မလား?
FusionPOS မှာ ဘောက်ချာဆိုဒ်ကို POS Device မှာ built-in ပါဝင်တဲ့ 58mm Printer အပြင် Portable Recipt Printer ဖြင့်တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ရန်80mm ဘောက်ချာဆိုဒ် ကိုပါထောက်ပံ့ ပေးထားပါတယ်
လွယ်ကူတယ်..မြန်ဆန်တယ်.. scan ဖတ်လိုက်ရုံပဲ
FusionPOS မှာ 1D Barcode ရော 2D Barcode ပါ scan ဖတ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် အလုပ်ကြိုးစားတဲ့ သင့်ကို လွယ်ကူမြန်ဆန်စေမှာပါ
သင်၏ လက်ကိုင်ဖုန်း သည် သင်၏ အရောင်းဆိုင် ပါ
FusionPOS ကို သင့်ရဲ့ Mobile Phone/Tablet တွေနဲ့ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့အတွက် အလွယ်တကူ သယ်သွားနိုင်ပြီး သင့်ဆိုင်မှာ သီးခြားနေရာပေးစရာ မလိုတော့ပါ။ အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်ရည် ရရှိဖို့Android Version 5.1 နှင့်အထက်ကို အသုံးပြုပေးဖို့ အကြံပြုပါရစေ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ကျန်တွေ နည်းနေတာကို သင်သတိထားမိပါသလား?
FusionPOS မှာ လက်ကျန်နည်းကုန်ပစ္စည်း၊
အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဖော်ပြပေးတဲ့အတွက် ဖောက်သည်တွေ လက်မလွတ်တော့ဘူးပေါ့
သင့်ဆိုင်မှာ မလိုအပ်တဲ့ အသုံးစရိတ်တွေ များနေပြီလား?
FusionPOS မှာ သင့်ဆိုင်ရဲ့ အသုံးစရိတ်တွေ (ဥပမာ မီတာခ၊ စည်ပင်ခွန် …) ကို မှတ်သားထားနိုင်တဲ့အတွက် မလိုအပ်တဲ့အသုံးစရိတ်တွေကို အလွယ်တကူ လျှော့ချနိုင်ပါတယ်
အရောင်းစာရင်း နဲ့အဝယ်စာရင်းတွေကြောင့် သင်စိတ်ရှုပ်နေရပြီလား?
FusionPOS မှာ အလွယ်တကူ အရောင်း/အ၀ယ် ပြုလုပ်နိုင်သည့်အပြင် ကုန်ပစ္စည်း လက်ကျန်စာရင်းကို အလိုအလျောက်ချိန်ညှိပေးတဲ့အတွက် သင်စိတ်ရှုပ်ရတဲ့အချိန်တွေကို အပြီးတိုင် နှုတ်ဆက်လိုက်ပါ
သင့်ဆိုင်ရဲ့ဝယ်သူတွေ၊ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ ကုန်သည်တွေနဲ့ အဆက်အသွယ်ပြတ်နေပြီလား?
FusionPOS မှာ Customer နဲ့ Supplierရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေအပြင် ပေးရန်ရှိ/ရရန်ရှိ စာရင်းများကိုပါ မှတ်သားပေးထားတဲ့ အတွက် အချိန်မရွေးဆက်သွယ်နိုင်ပြီး သင်နဲ့ သင့််ဖောက်သည်တွေရဲ့ဆက်ဆံရေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေမှာပါ
တိကျ တဲ့အချက်အလက် မှန်ကန် တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက် တိုးတက် လာမယ့် သင့်ဆိုင် ရဲ့အနာဂတ်
FusionPOS မှာ သင့်ဆိုင်အတွက် Reports အမျိုးအစားပေါင်း ၂၀ကျော် ဖြင့် အချက်အလက်တွေကို တိကျစွာ ဖော်ပြပေးထားတဲ့အတွက် မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချဖို့ သင့်ကို ကူညီပေးမှာပါ
သင့်ဆိုင်ရဲ့ အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီ သိချင်ပါသလား?
FusionPOS မှာ သင့်ဆိုင်ရဲ့ အရှုံး/အမြတ် ၊ ရောင်းအား/၀ယ်လိုအား ၊ ၀င်ငွေ/ထွက်ငွေ တို့ကို သင့်ကိုယ်စား တွက်ချက်ပြီး Dashboard မှာ အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီ ဖော်ပြပေးမှာပါ
ရှုံးနေသလား? မြတ်နေသလား? ရင်ခုန်ကြည့်ရအောင်
FusionPOS မှာ သင့်ဆိုင်ရဲ့ အရှူံးအမြတ် အခြေအနေကို လအလိုက်၊ နှစ်အလိုက် သင့်စိတ်တိုင်းကျ ရင်ခုန်ကြည့်လိုက်ပါ
သင့်ဆိုင်ကို အမြတ်အများဆုံး ရှာပေးတဲ့ကုန်ပစ္စည်းက ဘာဖြစ်မလဲ?
FusionPOS မှာ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး ကုန်ပစ္စည်းကို အရေအတွက်အလိုက်၊ ပမာဏအလိုက်၊ ကုန်အုပ်စုအလိုက် ဖော်ပြပေးတဲ့အပြင် ၀ါရင့်အရောင်းထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပါ ရှာဖွေပေးနိုင်တော့ အမြတ်ငွေတိုးလာတာပေါ့
သင့်ဆိုင်ရဲ့ လက်ရှိရင်းနှီးမြှပ်နှံထားတဲ့တန်ဖိုးကို သင်တွက်ကြည့်ဖူးပါသလား?
FusionPOS မှာ သင့်ဆိုင်ရဲ့ လက်ရှိရင်းနှီးမြှပ်နှံထားတဲ့တန်ဖိုးကို ကုန်ပစ္စည်းအလိုက်၊ ကုန်အုပ်စုအလိုက် စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း တွက်ချက်ပေးမယ်ဆိုရင် သင်အံ့သြသွားမလား
ဘယ်ပစ္စည်းကို ဘယ်သူ့ဆီမှာ ၀ယ်ရင်ဈေးပိုသက်သာမလဲ?
FusionPOSမှာ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီအလိုက် နောက်ဆုံးဝယ်ယူထားတဲ့ဈေးနှူန်းနဲ့ ကုန်သည်များကို တွဲဖက်ဖော်ပြပေးထားတဲ့အတွက် ဈေးနှူန်းသက်သာတဲ့ ကုန်သည်ကို ရွေးဝယ်နိုင်တော့ သင့်အတွက် အမြတ်ပိုကျန်တာပေါ့
ငွေလက်ကျန်ရှင်းတမ်းမထားမိလို့ အငြင်းပွားစရာ ဖြစ်နေပြီလား?
FusionPOS မှာ သင့်ဆိုင်ရဲ့ငွေလက်ကျန်ရှင်းတမ်းတွေကို ဈေးဝယ်သူတွေအတွက်ရော ကုန်သည်တွေအတွက်ပါ မှတ်သားထားနိုင်တဲ့အတွက် အငြင်းပွားစရာ မရှိတော့ဘဲ သင်နဲ့သင့်မိတ်ဆွေကြား ယုံကြည်မှုကို တိုးလာစေမှာပါ
သင့်ဆိုင်မှာ ဘယ်လတွေ ရောင်းအားပိုကောင်းနေသလဲ?
FusionPOS မှာ လအလိုက် ရောင်းအားတွေကို ဖော်ပြပေးထားတော့ ရောင်းအားကောင်းတဲ့လတွေအတွက် ကုန်ပစ္စည်းတွေ ကြိုတင်ဝယ်ယူထားဖို့နဲ့ ရောင်းအားနည်းတဲ့လတွေမှာ ဘယ်လိုပရိုမိုးရှင်းတွေနဲ့ အရောင်းမြှင့်တင်ရမလဲ ကြိုတင်စီစဉ်နိုင်ပြီပေါ့
သင့်ဆိုင်ရဲ့ အမာခံ ဖောက်သည်ကြီးတွေက ဘယ်သူတွေပါလိမ့်?
FusionPOS မှာ သင့်ဆိုင်ရဲ့ အမာခံဖောက်သည်ကြီးတွေကို ဖော်ပြထားတော့ သင့်အနေနဲ့ သူတို့အတွက် ပိုကောင်းတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေ ပေးနိုင်ဖို့ ကြိုတင်စီစဉ်နိုင်ပြီပေါ့
၀ါဝါမြင်တိုင်း ရွှေ မထင်လိုက်ပါနဲ့
သင့်ဆိုင်အတွက် အမှန်တကယ်အကျိုးရှိစေမယ့် ရွှေမြန်မာတို့ရဲ့ Premium Quality FusionPOS ကို ယခုပဲ (၇) ရက်အခမဲ့ စမ်းသုံးကြည့်လိုက်ပါ
+959427 666 368
အမှတ်(၃၃) ၊ (၅)လွှာ
© , Designed & Coded by DigitalFusion.